Shir uga furmay magaalada Baydhabo labada maamul goboleed ee Hirshabeelle iyo K/Galbeed… – Hagaag.com
28 Janaayo 2021 in English // Anger in Somalia as sons secretly sent to serve in Eritrea military force…
28 Janaayo 2021 in English // China toughens language, warns Taiwan that independence ‘means war’…
28 Janaayo 2021 in English // New Pentagon chief praises Germany for hosting U.S. troops, reversing Trump’s tack…
28 Janaayo 2021 in English // Decrying vaccines, Tanzania leader says ‘God will protect’ from COVID-19…
28 Janaayo 2021 in National // Wafdi ka socda Dowladda Somalia oo isugu jira Wasiiro iyo Saraakiil ciidan ayaa gaaray…
Shir uga furmay magaalada Baydhabo labada maamul goboleed ee Hirshabeelle iyo K/Galbeed…
Posted on 15 Janaayo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo kan Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shir uga furmay magaalada Baydhabo ayaa kaga wad hadlay arrimo badan oo ku saabsan iskaashi dhexmara labada maamul.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorsheynta iyo maalgashiga ee dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa kaloo ka qeyb galay Wasiiro iyo Xildhibaanno ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya & labada dowlad Goboleed, Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Safiirka Sweden ee Soomaaliya iyo xubno kale.
Shirkan oo socon doona muddo labo cisho ah ayaa lagu soo bandhigayaa kaabayaasha dhaqaale ee ay leeyihiin labadaas maamul, gaar ahaan dhanka wax soo saarka beeraha.
Wasiirka Qorsheynta iyo maalgashiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Maxamed Nuur Madoobe Nunow ayaa sheegay in labada Maamul ay ku heshiiyeen sidii wadajir looga qeyb qaadan lahaa la dagaallanka Al-Shabaab, dib u dhiska waddooyinka labada maamul iyo iskaashiga kaabayaasha dhaqaalaha.
“Ajandaha shirka waxa uu ahaa oo aan kala hadleynay Midowga Yurub xoojinta amniga guud ee labada dowlad goboleed, xasilinta Nabadgelyada, iskaashiga dhaqaale oo ay yeeshaan labada dowlad goboleed, gaar ahaan horumarinta xannaananada xoolaha, horumarinta beeraha, horumarinta kalluumesiga, dhismaha waddooyinka isku xira labada maamul iyo ka hortagga fatahaadda ka dhalata webiga Shabeelle” ayuu yiri Wasiirka Qorsheynta Koonfur Galbeed.
About Admin (12929 Articles)
Anger in Somalia as sons secretly sent to serve in Eritrea military force…
China toughens language, warns Taiwan that independence ‘means war’…
New Pentagon chief praises Germany for hosting U.S. troops, reversing Trump’s tack…
Haweenay ka shaqeysa diyaaradaha ayaa rakaabka kula talisay inaysan cabin biyo koob loogu…